Vehivavy Kandidà Amin’ny Fifidianana Kambojiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2013 18:08 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Nederlands, 日本語, Español, English
Ho fanamaroana ny fisoloantena ataon'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny politika, dia namoaka sarintany ahitana ny fanadihadiana momba ny vehivavy kandidà mandray anjara amin'ny fifidianana izay ho ao amin'ny Antenimieram-Pirenena ny Cambodian Center for Human Rights (CCHR=Ivotoerana Kambojiana Ho amin'ny Zon'Olombelona).
Ny CCHR dia fikambanana ao an-toerana miady ho amin'ny zo ara-tsivily sy zo ara-politika ao Kambodza ary mavitrika amin'ny fampiasana ny fitaovan-tseraserra vaovao amin'ny fitondrana ny fisoloam-bavany. Hotontosaina amin'ny 28 jolay ny fifidianana ao Kambodza.
Ny angona nampiasaina hananganana ny sarintany, izay ampiatranoan'ny sithi.org, dia mifototra amin'ny fandraketana ofisialy navoakan'ny Komitim-Pifidianana Nasionaly (NEC).
Nandritra ny fifidianana kaominaly/Sangkat 2012 dia efa namoaka sarintany ihany koa ny CCHR izay nanasongadina ny tahirin-kevitra momba ny fisoloantena ara-politikan'ny vehivavy isaky ny kaominina tao amin'ny firenena. Tamin'ny fampiasana ny angona avy amin'ny NEC, nasehon'ny vali-pifidianana fa vehivavy 2038 no voafidy ho vaomieran'ny kaominina manerana ny firenena, izay maneho ny 17,79 isan-jaton'ny toerana rehetra. Vitsy kokoa ny vehivavy kandidà (4,6 isan-jato) izay voafidy soa aman-tsara ho Lehiben'ny Kaominina.